Qarax ka dhacay Magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax xoogan oo duhurnimadii Maanta ka dhacay gudaha Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho, kaasi oo jugtiisa laga maqlay qeyb kamid ah Suuqa.
Qaraxaas ayaa waxaa uu ahaa mid ka dhashay Haan Gaas oo aad u buuxday, waxaana sigaar ah ugu dhex qaraxday goob Ganacsi oo ku taalla Suuqa, laguna magacaabo Waayo-arag Electronic.
Sidoo kale dadka ayaa sheegay in qaraxaas uu geystay khasaaro kala duwan, wallow aan la cadeyn tirada khasaaraha jira, iyadoo dadweyne badan oo Ganacsato iyo kuwo kale ah ay hareereeyeen goobta.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda Federaalka oo u maleynayay qaraxaas inuu ka dhashay walxo qarxa ayaa si deg deg ah u gaaray goobta, isla markaana xiray aaga, sidoo kalena hakad geliyay isku socodka.
Xaaladda Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho ayaa degan, waxaana burbur xoogan uu soo gaaray goobtu qaraxu ka dhacay oo aheyd Waayo-arag Electronic, sida ay sheegeen dad goobjoogayaal.